मिस नेपाल अर्थ हुन चाहन्थें - अन्तर्वार्ता - नारी
मिस नेपाल अर्थ हुन चाहन्थें
वर्षा लेखी, मिस नेपाल इन्टरनेसनल
मिस नेपाल इन्टरनेसनलका रूपमा तपाईंको नाम उद्घोष हुँदा तपाईं सामान्य नै देखिनुभयो नि ?
रिजल्ट आउनुअघि म आँखा चिम्म गरेर बसेकी मात्र थिएँ, वर्षा लेखी भनेर नाम आइहाल्यो । त्यसैले म हड्बडिइन र कुनै प्रतिक्रिया व्यक्त गर्नै भ्याइन ।
उपाधि जित्नेमा कत्तिको विश्वस्त हुनुहुन्थ्यो ?
उत्कृष्ट १० मा पर्छु भन्ने थियो । प्री–जजिङमा राम्रो उत्तर दिएपछि उत्कृष्ट ५ मा पनि पर्छु भन्ने लाग्यो । त्यसपछि उत्कृष्ट ३ मा पर्छु भन्ने भयो । मैले फस्ट रनर्सअप हुने आशा गरेकी थिएँ ।
तपाईंको नाम लिनासाथ सर्वप्रथम कसलाई सम्झनुभयो ?
शुभेच्छा खड्कालाई ।
तपाईंको पनि मिस नेपाल हुने सानैदेखिको सपना हो कि ?
ममा मिस नेपाल हुने सपना थिएन । नेपालमा अहिलेसम्म वातावरणसम्बन्धी कुनै पनि रिसर्च सेन्टर नभएको र आफू वातावरणको विद्यार्थी भएकाले त्यो होस् भन्ने चाहना थियो । म यो प्रतियोगितामा भाग लिँदै मिस नेपाल अर्थ भएर मिस अर्थमा भाग लिन जान चाहन्थें तर मिस इन्टरनेसनलमा जाने अवसर मिल्यो ।
थारु समुदायबाट तपार्इंं पहिलो विजेता हुनुहुन्छ, कस्तो अनुभव भैरहेको छ ?
थारु समुदाय अलि पछाडि नै छ । त्यस्तो समुदायबाट आएर १६ जना प्रतिस्पर्धीभन्दा अगाडि पुग्दा आनन्द र गर्व अनुभव भएको छ ।
मिस नेपाल भन्नासाथ कसलाई सम्झनुहुन्छ ?
इशानी श्रेष्ठ र सृष्टि श्रेष्ठलाई ।
तपाईंको सफलतामा कसको बढी हात छ ?
सुरुमा त हाम्रो परिवारमा मम्मीका सन्तान बहिनी र म मात्र भएकाले छोरा छैन भनेर नाक खुम्च्याउँथे । त्यही कारण पनि ममा केही गर्नुपर्छ भन्ने भावना बढेको हो । साथै सिर्जना रेग्मी यो प्रतियोगितामा नभएकी भए म यो ठाउँमा पुग्ने थिइन । उनको सल्लाह र सपोर्टलाई म कहिल्यै बिर्सन सक्दिन ।
तपाईं त एकदमै फिट हुनुहुन्छ, फिटनेसका लागि के गर्नुहुन्छ ?
स्कुले जीवनदेखि नै योग गर्दै आएकी छु । मेरा मम्मी र बुबा दुवै अस्वस्थ भएकाले पनि म योगतर्फ आकर्षित भएकी हुँ । यद्यपि म खाना भने बार्दिन ।
कत्तिको फेसेनेबल हुनुहुन्छ ?
म फेसन ट्रेन्डको ठीक उल्टो हिँड्छु । फेसनमा आउँदैमा कुनै पनि पहिरन लगाइहाल्दिन । आफूलाई कस्तो सुहाउँछ त्यसमा ध्यान दिन्छु । ममा अरूभन्दा केही भिन्न देखिने चाहना छ